Money – Page 11 – Gentleman Magazine
သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့အတူ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု ပူးပေါင်းတည်ထောင်တာဟာ တကယ်ကောင်းတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စိန်ခေါ်မှုတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာကိုတော့ မမေ့လိုက်ပါနဲ့။ သင့်အနေနဲ့ သင့်ကို တွန်းအားပေးနိုင်မယ့်သူ၊ သင်မသိတာတွေကို သိအောင်ဝေမျှပေးနိုင်မယ့်သူမျိုးတွေနဲ့ တွဲဖက်ပြီး အလုပ်လုပ်ချင်မှာ သေချာပါတယ်။ သင့်ရဲ့အသိမိတ်ဆွေတွေက ဒီလိုလူမျိုးတွေဆိုရင်တော့ ကံကောင်းတယ်လို့ ဆိုရပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့ပေမယ့် အားလုံးအဆင်ပြေပြော ချောချောမွေ့မွေ့ ရှေ့ဆက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့တော့ တထစ်ချယုံကြည်မထားပါနဲ့ဦး။
(၁၉၇၂)ခုနှစ်မှာ Jim Cathcart ဟာ အာကန်းဆပ်အိမ်ရာအာဏာပိုင်လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာ ၀န်ထမ်းအဖြစ် အလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီး တစ်လကို လစာ (၅၂၅)ဒေါ်လာရပါတယ်။ အိမ်ထောင်ရှိကလေးတစ်ယောက်ဖခင်ဖြစ်ပြီး ဘွဲ့ရပညာတတ်မဟုတ်သလို အောင်မြင်မှုလည်း များများစားစားမရှိ အနာဂတ်အတွက်လည်း ဘာအစီအစဉ်မှ မရှိသူတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ တစ်မနက်မှာတော့ Jim ဟာ သူ့ရုံးခန်းထဲမှာထိုင်ပြီး ရေဒီယိုနားထောင်နေခဲ့ပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ ရေဒီယိုကနေ လူသိများတဲ့
လောကကြီးမှာ တချို့သူတွေက ငွေလွယ်လွယ်နဲ့ ရှာနိုင်ကြပြီး တချို့တွေကျ လုံးလည်ချာလည် လိုက်နေကြတယ်လို့ တွေးမိဖူးပါသလား။ မှန်ပါတယ်။ တချို့သူတွေက ငွေရှာပိုကောင်းတတ်ကြပါတယ်။ သတင်းကောင်းတစ်ခုပေးပါမယ်။ ငွေရှာတဲ့နေရာမှာ ဆရာတစ်ဆူဖြစ်အောင် လေ့ကျင့်ယူနိုင်ပါတယ်။ ပိုပြီးကောင်းတဲ့ သတင်းတစ်ခုရှိပါသေးတယ်။ ငွေ လွယ်လွယ်နဲ့ ရှာနိုင်မယ့် နည်းလမ်းငါးခု အောက်မှာ ရှိပါတယ်။ ၁. အဆင်မပြေဖြစ်တာကို
ကမ္ဘာ့အအောင်မြင်ဆုံး လူ ၁၁ ယောက်ဟာ ဆယ်ကျော်သက်ဘဝမှာ ဘာလုပ်နေသလဲ?
အောင်မြင်ကျော်ကြားသူ အများစုဟာ သူတို့ဘဝတက်လမ်းကို ဆယ်ကျော်သက်ဘဝမှာတင် စတင်ရှာဖွေနေကြပါပြီ။ သူတို့ ဆယ်ကျော်သက်တုန်းက ဘာတွေလုပ်နေလဲ ကြည့်ကြရအောင်။ ၁. Bill Gates Gates ဟာ ဆယ်ကျော်သက်ဘဝမှ. ကွန်ပျူတာတွေကို ချစ်ကျွမ်းဝင်ခဲ့ပြီး သူ အသက် ၁၅ နှစ်မှာ သူ့သူငယ်ချင်း မိုက်ခရိုဆော့ဖ် ပူးတွဲတည်ထောင်သူ Paul
၀န်ထမ်းတိုင်းသိထားရမယ့် အစည်းအဝေး ထုံးစံစည်းကမ်းများ
အလုပ်အစည်းအဝေးတွေက ပျော်စရာမကောင်းပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သင့်အနေနဲ့ မဖြစ်မနေ အစည်းအဝေးတက်ရတဲ့အခါမှာ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ၊ အထက်လူကြီးတွေနဲ့ ဖောက်သည်တွေရှေ့မှာ အထင်ကြီးလေးစားဖွယ်ရာ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆန်ဆန် ပြုမှုနေထိုင်တတ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဒီအတွက် ၀န်ထမ်းတိုင်းသိထားဖို့လိုအပ်တဲ့ အစည်းအဝေးထုံးစံ စည်းကမ်း(၁၅)ခုကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ ၁။ အခြားသူတွေကို တွေ့ဆုံမိတ်ဆက်ပါ။ အစည်းအဝေးမစခင်အချိန်ဟာ တခြားသူတွေနဲ့ တွေ့ဆုံမိတ်ဆက်ဖို့ အခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
သင် တစ်နေ့ကို အလုပ်မှာ ဘယ်လောက်ကြာကြာ အာရုံလွှဲခံရလဲဆိုတာ တွက်ကြည့်ကြရအောင်။ သင် အလုပ်မှာ တစ်နေ့ကို ဘယ်နှကြိမ် အနှောင့်ယှက်ခံရလဲဆိုတာ စဉ်းစားကြည့်ပါ။့ ပြီးရင် ရတဲ့ အကြိမ်အရေအတွက်ကို ၂၅ နဲ့ မြှောက်ပါ။ အဲဒါဟာ အလုပ်မှာ သင် ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ အာရုံစူးစိုက်ချိန် မိနစ်ပါပဲ။ အနှောင့်အယှက်
အောင်မြင်မှုဆိုတဲ့အရာက စိတ်ရောကိုယ်ပါနှစ်မြုပ်ပြီး မလုပ်ဆောင်ပဲ အလွယ်တကူရောက်ရှိလာမယ့်အရာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သင်အနေနဲ့ အမူအကျင့်ကောင်းတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ သင့်ရရှိလာမယ့် အကျိုးရလဒ်တွေနဲ့ အောင်မြင်မှုတွေကို တားဆီးပိတ်ပင်နိုင်မယ့်သူ ဒီကမ္ဘာမှာရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒ့ါကြောင့် သင့်ရဲ့ဘ၀မှာ စောစောစီးစီးအောင်မြင်မှုတွေ ဆွတ်ခူးနိုင်ဖို့အတွက် နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုတိုင်းမှာ သတိပြုဆင်ခြင်ရ မယ့် အမူအကျင့်(၂၀)ကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ ၁။ အချိန်စီမံခန့်ခွဲမှုကောင်းပါစေ။